Dowladda Puntland oo Shacabka ugu baaqday in ay Roob-doon isugu soo baxaan – Radio Daljir
Febraayo 18, 2016 11:40 b 0
Bosaaso, Febru, 18, 2016 -(Daljir)_ Wasaradda Cadaalada Puntland ayaa maanta warbaahinta ka sheegtay in 25-ka bishaan guud ahaan gobalada laga qaban doono banaanbaxyo roob doon o ILLAAHEY looga baryayo inuu qoysaska Soomaaliyeed abaarta iyo biyo la’aanta ka dul-qaado.
Wasiirka Cadaalada Saalax Xabiib Jaamac, oo shir jaraa’id maanta (Khamiis) ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay inay jirto welwel laga qabo in abaaraha gobalada Puntland qaarkood ka jira ay saamayn daran gaystaan, sidaasi darteedna loo baahan yahay shacabka, culimadda iyo dowladduba isku diyaariso maalinta roob doonta oo diiniyan banaan.
Xabiib, ayaa faray wasaaradaha waxbarashada, shaqada iyo shaqaalaha inay fasaxaan Ardayda iyo dhamaan shaqaalaha kala duwan ee ka howl gala deegaanada Puntland, isagoo codsaday in la diyaariyo goobihii la isugu imaan lahaa.
Meelaha ay abaartu ka jirto ayaa ka mid ah gobaladda Sool, Sanaag, Nugaal iyo Beri, deegaanadaasi oo lagu qiyaasay 78-goobeed qaarkood biyaha ayaa qaali ka noqday waana arrinta sababi karta inay xaaladu sii xumaato.
Guddi loo saaray isla markasna madax u yahay madaxwayne ku xigeenka Cabdixakiin Camey ayaa ku mashquulsan sidii qoysaska dhiban biyo dhaamin loogu samayn lahaa, qurba joogta iyo hantiilayaasha ayaa laga codsaday inay guddiga lasoo xiriiraan kana qayb qaataan dadaalada socda.